NextMapping | बीमा केस स्टडी: ote तरीकाले टाढा काम गर्ने
अतिथि पोष्ट द्वारा क्रिस्टल मेट्ज - क्रिस्टल पनि एक प्रमाणित नेक्स्टमैपिंग उद्यमी कोच हो व्यवसायीहरूसँग सफलतापूर्वक नक्शा बनाउनको लागि अधिक सफलताको लागि के।
टाढाबाट कार्य गर्दै, वा तपाईंको व्यवसाय चलाउँदै, कर्मचारीहरू ब्यवस्थापन गर्दै र ग्राहकलाई घरबाट खुशी राख्दै, कम्तीमा भन्नु अलि मुश्किल हुन सक्छ। त्यो होइन कि हामीसँग धेरै विकल्पहरू छन्।
COVID ले हाम्रो जीवनको लगभग सबै क्षेत्रहरूमा असर गरिरहेको छ, यसले आफैलाई सम्झाउन मद्दत गर्दछ कि त्यहाँ हामी चीजहरू नियन्त्रण गर्न सक्दैनौं।
के हामी नियन्त्रण गर्न सक्दछौं कसरी हामी केन्द्रित रहन्छौं जबकि हामी काम गर्ने यी "नयाँ" तरिकाहरू मार्फत संक्रमण गर्छौं (हिम्मत गर्छौं पिभोट)।
यो सूचीको समीक्षा गर्नुहोस् क्रिस्टल टाढाका Work तरीकाले टाढा टाढा कार्यका लागि बनाईएको छ, ताकि तपाईं जहिले पनि प्रभावकारी रहनुहुनेछ।
सुझाव # १ लचिलो हुनुहोस्
यो लामो समयको लागि ज्ञात छ कि जब तपाईंले तिनीहरूलाई उनीहरूको व्यक्तिगत जीवनको साथ उनीहरूको कामको जीवन मिलाउन अनुमति दिनुहुन्छ, वा जसरी हामी यसलाई कल गर्न चाहन्छौ, कर्मचारीहरू राम्रो काम गर्दछन्।
महामारी भन्दा पहिले, हामी पहिले नै कामको यस तरिकालाई अँगालेका थियौं। कसैले बिरामी बच्चालाई स्कूलबाट उठाउनु पर्छ? समस्या छैन। तपाईं आफ्नो छोरीलाई पहिलो नृत्यमा देख्न चाहानुहुन्छ यद्यपि यो बुधबार मध्य दिउँसो भइरहेको छ? त्यसको लागि जानुहोस्।
काम \_ जीवन सन्तुलन प्रदान गरेर र परिस्थितिमा समानुभूतिशील भएर, कर्मचारीहरू त्यो प्रतिफल दिन चाहन्छन्।
जब मलाई ठूलो दाबी वा परियोजना समाप्त गर्न थप घण्टा सम्म उनीहरूको आवश्यकता पर्दछ, तिनीहरू हुन्छन्। जब म तिनीहरूलाई बिहान चाँडो आउन भन्दछु किनकि अर्को समूहको सदस्य बिरामी बच्चा छ, तिनीहरू हुन्छन्।
आजकल, हामी टाढा टाढा काम गर्दा लचिलो रहनको लागि हाम्रो घरको साथ हाम्रो शारीरिक कार्यालय संयोजन गर्दछौं। हामी कसैलाई बच्चाहरूबाट टाढा समय चाहिन्छ, वा काम गर्नको लागि केवल शान्त ठाउँ चाहिन्छ, त्यसैले हामी अफिसमा जान्छौं जहाँ कुनै अवरोधहरू छैनन्। हामी मध्ये केही बिहान चराचुरु .्गीहरू हुन्छौं, त्यसैले हामी बिहान फोन कलका लागि पहिलो पारी लिन्छौं।
पहिले भन्दा बढि, हामी सँगै काम गर्छौं र रिमोटको कामका लागि हाम्रो प्रत्येक शक्तिमा खेल्दछौं।
सुझाव # २ संचार, सञ्चार, सञ्चार
म टाढाबाट कार्य गर्दा म निरन्तर मेरो टोलीको साथ जाँच गर्दैछु। हामी साप्ताहिक भिडियो बैठकहरू सुनिश्चित गर्दछौं कि हामी सबैले के-के गरिरहेका छन् त्यसमा अप-टु-डेट छौं, साथै "टीम" भावना र मनोबल बलियो राख्दै।
हामीसँग पनि अनुरोध गरिएको बखत एक वा एक बैठकहरू हुन्छौं, वा कहिले यसलाई कार्य गर्न सक्छौं। अचम्मको कुरा, राम्रो पुरानो टेलिफोनले एक अर्कासँग प्रभावकारी संचारको लागि पनि आश्चर्य कार्य गर्दछ!
किनभने हाम्रो एजेन्सी यति लचिलो छ, मैले सबैको म्यादलाई पक्का गर्दैछु भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न पनि जाँच्नु पर्छ, तालिका काम गरिरहेको छ र प्रभावकारी छ, र प्रत्येक सदस्यको मद्दत उनीहरूले पाउनुपर्दछ। यदि त्यहाँ मुद्दा छ, वा चासो छ भने, म सँधै कुराकानी गर्न यहाँ छु।
चेक इन विश्वास निर्माण गर्नुहोस्। म मेरा कामदारहरूलाई विश्वास गर्दछु कि उनीहरूले घरबाट के गर्नु पर्ने हो भन्दछन्, र तिनीहरू विश्वास गर्दछन् कि म त्यहाँ छु तिनीहरूलाई नेतृत्व गर्न, प्रक्रियाहरूको मूल्यांकन गर्न, र हाम्रो एजेन्सी र हाम्रा ग्राहकहरूको लागि सही निर्णय लिन।
म इमान्दारीपूर्वक भन्न सक्छु कि अफिसको भ्रमणको अभाव बाहेक, हाम्रा कुनै पनि ग्राहकले हामीले टाढाबाटै काम गरिरहेको याद गरेनौं किनकि हामी हाम्रो प्रक्रिया र ग्राहक सेवा पहिलेको जस्तै महान स्तरमा राख्ने कुरामा केन्द्रित छौं।
टिप #3कार्य संग तपाईका ग्राहकहरु
हाम्रा ग्राहकहरु अहिले हामी जस्तै धेरै चीजहरू मार्फत जाँदैछन्। उनीहरूसँग बच्चाहरू, परिवारहरू, जीवन र सबै प्रकारका परिवर्तनहरू भइरहेका छन्। उल्लेख गर्नुपर्दैन, कि हामी उनीहरूको जीवनको सबैभन्दा तनावपूर्ण समयमा उनीहरूबाट सुन्न सक्छौं - बेसमेन्ट बाढी, घरको आगलागी, वा प्रियजनको गुमाउँदा।
यसको शीर्षमा, सबैजनाको COVID मा अर्थतन्त्र फेरि खुल्दै सार्वजनिक स्थानहरूमा प्रवेश गर्ने बिभिन्न भावना र धारणा हुन्छन्। हामी त्यसलाई सम्मान गर्दछौं।
केही ग्राहकहरू घरमा बस्न रुचाउँछन् र हामीसँग फोन मार्फत, कुराकानी, वा ईमेल संचार मार्फत सम्झौता गर्छन्।
अरूले हामीलाई अफिसमा हेर्न चाहन्छन् ताकि हामी आमनेसामने भेट गर्न सकौं, वा हलवेमा भेट्न चाहन्छौ, वा पार्कि lotमा बाहिर जान्छौं।
जुनसुकै तरिकाबाट हाम्रो ग्राहकहरू भेट्न चाहन्छन्, हामी जहिले पनि सेनिटाइजेशन प्रक्रियाहरू पालना गर्दछौं, साथै ह्यान्ड सेनिटाइजर र फेस मास्कहरू प्रस्ताव गर्दछौं।
यदि यसले हाम्रो ग्राहकहरूको लागि काम गर्दछ भने हामी उनीहरूसँग समायोजन गर्न हामीले सकेजति गर्छौं, विशेष रूपमा यी समयमा, हामी टाढाबाट पनि काम गरिरहेका छौं भने पनि।
सुझाव # तपाईंको लक्ष्य छ, मात्र योजना छैन
व्यापार मा, हामीले अगाडि योजनाको आवश्यकता अनिश्चित समयमा पनि। यद्यपि, विश्व र "नियम" प्रायः परिवर्तन हुँदैछन्, हामीसँग भविष्यका लागि कठोर योजना छैन। यसको सट्टा, हाम्रो लक्ष्यहरू छन् किनकि योजनाहरू परिवर्तन हुनेछन् (र हामी त्योसँग ठीक हुनु आवश्यक छ)।
हामीलाई थाहा छ कि अधिक र अधिक व्यवसायहरू फेरि सुरु हुँदैछ, हामीलाई थाहा छ कि स्कूलहरू र डेकेरेस फेरि खुल्दै छन्, र हामीलाई थाहा छ कि सबै योजना गरिएको योजना तत्काल परिवर्तन हुन सक्छ।
हाम्रो लक्ष्य अक्टुबर भित्र फेरि हाम्रो कार्यालय पूर्ण-समय खोल्ने हो। सेप्टेम्बरमा त्यहाँ धेरै समायोजनहरू हुनेछन् र यो सम्भवतः नयाँ दिनचर्या, नयाँ तालिका, र त्यहाँ अलि अलि अस्थिरताको साथ धेरै व्यस्त हुनेछ।
यो रमाईलो छ किनकि यी सबै मार्फत पनि, मेरो टोलीका धेरै सदस्यहरूले भनेका छन् कि टाढाबाट काम गर्दा एकदमै फरक अनुभव भएको छ, यो तिनीहरूको जीवनमा अहिले सम्मको एकदमै सुसंगत चीज भएको छ।
मेरो टोलीले यति राम्रो गरिरहेको बेला किन अकाल परिवर्तनहरू गर्ने? यहाँ कुरा छ: मसंग छैन!
तपाईंलाई थाहा छ तपाईंको आमाले कसरी यसो भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, "त्यसो भए यदि तपाइँका सबै साथीहरूले एक पुलबाट उफ्रनुभयो भने, तपाइँ पनि गर्नुहुन्छ?"। यो त्यस्तो प्रकारको हो।
केवल किनभने केही निश्चित व्यवसाय वा उद्योगले केहि गर्दैछ, यसको मतलब यो होइन कि तपाईंले पनि गर्नु पर्छ।
केवल तपाइँले गर्नुपर्ने कार्य भनेको तपाइँको विशिष्ट व्यवसाय, कर्मचारीहरू र ग्राहकहरूको लागि के काम गर्दछ।
के हामी अक्टोबरमा खोल्ने छौं? आशा छ। के हामी यसको ग्यारेन्टी गर्न सक्छौं? हुदै हैन। के हामी अझै तपाईंको बिमा आवश्यकताहरूको लागि डटहरू जोड्दछौं, जे भए पनि? You betcha!
सुझाव # ind दयालु हुनुहोस्
हामी निरन्तर अरूप्रति दयालु हुन कोसिस गर्छौं तर कहिलेकाँही हामी आफुप्रति दयालु हुन बिर्सन्छौं। मैले लेख्ने क्रममा, म आफ्नो परिवारसँग छुट्टीमा जाँदै छु र यो अझ राम्रो समयमा आउन सकेन।
म विश्वास गर्दछु कि मैले भर्खर COVID शोक भित्तामा हिर्काएँ।
हामी सबै बिभिन्न तरिकाहरूमा शोक गर्दछौं। केहि मानिसहरु यो सबै को शुरू मा दु: खी र समायोजन गर्न को लागी केहि लामो समय लाग्यो। मेरो जस्तै केहीले पनि चाँडै नै ठूला परिवर्तनहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्दा मेरो व्यापार सुनिश्चित गर्न, मेरो टोली र मेरा ग्राहकहरूको ध्यान लिएको थियो। जसले प्रशोधनको लागि धेरै हेडस्पेस छोड्दैन।
मलाई थाहा छ धेरै मानिसहरू उस्तै स्थितिमा छन् जुन म अहिले नै हुँ - जब सबै चीजले अन्तमा तपाईंलाई हिर्काउँछन्। यो महिला र पुरुषहरूको लागि जान्छ।
यस तरिकाले महसुस गर्नु ठीक छ! आफुप्रति दयालु हुनुहोस्, बुझ्नुहोस् कि यो एकदम सामान्य छ र तपाई यस मार्फत प्राप्त गर्नुहुनेछ। कहिलेकाँही हामीलाई पुनःसेट गर्नुहोस् वा चीजहरू पुनःसेट गर्न मद्दत गर्नुहोस्। यदि तपाइँ कामबाट समय निकाल्न सक्नुहुनेछ, केवल एक वा दुई दिनको लागि पनि, त्यसले अत्यन्त मद्दत गर्न सक्दछ।
केवल केही समयको लागि काम बन्द गर्न सम्झनुहोस् - तपाईंको हप्ताको सूची वा लक्ष्यहरूको बारेमा सोच्न को लागी अर्को हप्ताको लागि प्रयास नगर्नुहोस्। तपाईंको फोन बन्द गर्नुहोस्, केही वाइन पिउनुहोस् वा तपाईंलाई थाँहा छ, बियरको केस, र आराम गर्ने प्रयास गर्नुहोस्।
यो सोच्न सजिलो छ, तर यो आवश्यक छ। यहाँ छ मेरो सानो रिक्तको आशाले मलाई पुनःसेट गर्न मद्दत गर्दछ र म फेरि ताजा महसुस गर्न र संसारमा लिन तयार छु! वा हुन सक्छ, धुलाई मात्र जस्तै।
मूल पोष्ट क्रिस्टल मेट्ज ब्लगमा देखा पर्‍यो - यहाँ जाँच गर्नुहोस्।